Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Eji ọgwụ jikwaa ime ime onwe ya ugbu a ọ dị mma
Taa, a na-ebipụta ọmụmụ ihe Model Model Feasibility and Irè (SAFE) na The Lancet Global Health. Ndị na-akwado ite ime nke ọma na Colectiva Feminista La Revuelta de Neuquén (Argentina), GIWYN (Nigeria), na ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, ya na ndị na-eme nchọpụta na Ibis Reproductive Health (South Africa na USA), haziri ma mejuputa ọmụmụ SAFE.
Ọmụmụ SAFE, ọmụmụ nke mbụ n'ụdị ya, kpọpụtara ihe karịrị 1,000 mmadụ bụ ndị kpọtụụrụ otu ndị na-akwado ite ime na Argentina ma ọ bụ Nigeria, soro ha ruo ihe dị ka otu ọnwa, wee tụọ nsonaazụ n'ahụmahụ ime ime onwe ha jikwaa onwe ha, na imecha ime na-enweghị ịwa ahụ. ntinye aka dị ka isi ihe pụta.
Ime ọgwụ jikwaa onwe ya gụnyere iji otu n'ime usoro ọgwụ abụọ kwụsị ime na-enweghị nlekọta ụlọ ọgwụ nke Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO) kwadoro. Usoro ọgwụ nke WHO kwadoro nke mifepristone yana misoprostol, ma ọ bụ misoprostol naanị, bụ ụzọ dị mma ma dị irè nke ịkwụsị ime na ntọala ụlọ ọgwụ. Ime ime nke onwe ya na nkwado gụnyere ndị ndụmọdụ ite ime na-abụghị ndị ụlọ ọgwụ zụrụ azụ bụ ndị na-enye ozi dabere na ojiji nke ite ime ọgwụ, yana ọmịiko mmetụta (na mgbe ụfọdụ nkwado anụ ahụ), n'oge usoro ite ime ọgwụ nke mmadụ jikwaara onwe ya. A na-enye nkwado ime ime site na ekwentị, site na nyiwe izi ozi dijitalụ echekwara, na/ma ọ bụ n'onwe.
Ọmụmụ SAFE na-ewusi ihe akaebe dị ugbu a ike na, site na iji ozi ziri ezi, ndị mmadụ nwere ike iji ọgwụ n'enweghị nsogbu na nke ọma kwụsị ime ime na mpụga ụlọ ọgwụ. Nchọpụta ndị a na-enye ihe akaebe maka nhụsianya nke nlekọta ite ime n'oge, ma na-akwado mkpa ọ dị ịnọgide na-enweta ụdị dịpụrụ adịpụ maka ite ime ọgwụ - gụnyere telemedicine - nke etinyere n'ọtụtụ mba n'ihi ọrịa COVID-19. Nsonaazụ sitere na ọmụmụ a na-atụkwa aro na SMA nwere nkwado sitere na nkwado nkwado nwere ike ịbụ atụmatụ bụ isi maka ịgbasa ohere ịnweta nlekọta afọ ime dị mma, dị mma.